बालाजुको जग्गा हडप्नेलाई पानीमुनि गए पनि छोडिन्न: मन्त्री बास्कोटा
काठमाडौं,साउन २३-चलचित्र विकास बोर्डको १९ औं वार्षिक उत्सव कार्यक्रममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुलप्रसाद बास्कोटा भन्छन्, ‘ बालाजुको जग्गा खोई ? नेपाली चलचित्रको विकासका लागि दिएको जग्गा व्यक्तिले ‘क्याप्चर’ गरेर मोजमस्ती गर्न मिल्छ ? अब पानीमुनि गए पनि छोडिन्न।’
काठमाडौंको बालाजुमा रहेको आफ्नो २० रोपनीभन्दा बढी जग्गा कसले बेचेर खायो भन्ने बारेमा सम्वद्ध पक्ष नै अहिलेसम्म बेखबर छ। मन्त्री बास्कोटाले कडा चेतावनी दिएपछि बोर्डले चलचित्र विकास कम्पनीको जग्गा कहाँ, कति रहेछ भनेर सोधखोज गर्न थाल्यो। तर, सरोकारावाला निकाय कसैले पनि छानबिनमा सहयोग नगरेको बोर्डका पदाधिकारीको गुनासो छ। चलचित्र विकास कम्पनीको कुल जग्गा २७ रोपनी जग्गाको जम्मा ६.७५ रोपनी जग्गा रहेको तथ्य फेला पारेको बोर्डका अध्यक्ष केशव भट्टराई बताउछन।
चलचित्र विकास बोर्डले आफ्नो जग्गाको अवस्था पत्ता लगाउन कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड, शेयर कारोबार गर्ने संस्थालगायतलाई पत्राचार गरेपनि कसैले जग्गाबारे विस्तृत जानकारी दिन नचाहेको देखिन्छ।
सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री बास्कोटाले चलचित्र विकास बोर्डलाई बालाजुको जग्गा खोजविन गर्न दिएको निर्देशन फेरि मन्त्रालयमै फर्किएको छ। कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले बोर्डसम्बन्धी फाइल नै नभएको गैरजिम्मेवार जवाफ पठाएको छ।
भूमाफियासँगको मिलेमतोमा फाइल गायब पारेको बोर्डका पदाधिकारीहरू आशंका व्यक्त गर्छन्। औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड र शेयर कारोबार गर्ने संस्थाले पनि चित्तबुझ्दो जवाफ नदिएको बोर्डका ती पदाधिकारीले जानकारी दिए।